Wararka – Calan Qaran
Ammaan iyo Dhaliil “Prof. Xasan Sheekh”
November 12, 2016 at 1:12 pm	0 comments
M/weynaha Somalia Prof. Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu nasiib u yeeshay inuu noqdo m/weynihii u horreeyey oo muddo nus qarni ah lagu doorto cod xor ah isagoo dalkiisa hooyo jooga. Wuxuu aad uga nasiib badnaa m/weyneyaashii ka horreeyey ee Kumeel gaarka, wuxuuna noqday madaxweyne awood leh oo si’ rasmi ah ulaRead More
Trump oo loo doortay Madaxweynaha Mareykanka
November 9, 2016 at 10:14 am	0 comments
Musharaxa xisbiga Jamhuuriga Donald Trump ayaa ku guuleystay doorashada madaxtinimada ee dalkaasi. Trump ayaa xilka kala wareegi doono madaxweyne Obama kaddib markii uu Hillary Clinton uga guuleystay 276 cod. Guusha Trump ayaa loo arkaa mid taariikhi ah waxa ayna ka fajicisay dad badan oo filayay in Hillary Clinton ay kaRead More
Wareysi: Keating oo Ka Hadlay Arrimaha Doorashada
November 4, 2016 at 6:52 am	0 comments
Danjiraha Q.M. ee Soomaaliya Michael Keating, ayaa ka hadlay doorashada lafilayo inay dhawaan ka dhacdo Soomaaliya. Waxa uu tilmaamay inay jiraan walaac ku xeeran doorashadaasi oo ay ka mid yihiin ammaanka iyo musuq maasuq. Hadalkaasi ayaa waxa uu ku sheegey Keating wareysi uu siiyay wariyaha VOA ee London Ridwaan XaajiRead More
Ololaha doorashada Mareykanka oo marxalad cusub galay
November 4, 2016 at 6:46 am	0 comments
Waxaa dardar xoog leh yeesha ololaha doorashada ee dalka Mareykanka kaas oo ku sii dhowaanaya xilligii uu xirmi lahaa. Hillary Clinton iyo Donald Trump waxay gobollada natiijada doorashada go’aanka ka gaaraya isugu soo bixiyeen taageerayaashooda. Labada musharrax waxa ay su’aalo ka keenayeen sida mid kastaa uusan dalkaasi u maamuli karin.Read More
November 4, 2016 at 6:45 am	0 comments
QM ayaa sheegtay in 239 muhaajiriin ah oo la rumaysan yahay inay ka yimaadeen galbeedka Africa ay ku dhinteen xeebaha Libya kadib markii laba doonyood oo ay la socdeen ay dageen. Hay’adda muhaajiriinta QM ayaa sheegtay in koox muhaajiriin ah oo ay ku jiraan 20 duymar ah iyo 6 caruurRead More
UN: Halabaaro xadgudubka ay geysteen ciidamada Myanmar
November 4, 2016 at 6:38 am	0 comments
Saraakiil sarsare oo katirsan xafiiska Qaramada Midoobay ee dalka Myanmar ayaa ku biiray baaqyada ah in la sameeyo baaritaano Madax banaan oo ku aadan wararka sheegaya in xadgudubyo ka dhan xuquqda aadanaha ay ka dhaceen gobolka Rakhine. Baaqyadan ayaa yimid kadib markii kooxo u ololeeyo xuquqda aadanaha ay booqasho kuRead More
Nigeria: 750,000 oo qof oo codsaday shan boqol oo shaqo
November 4, 2016 at 6:00 am	0 comments
Dowlada Nigeria ayaa sheegtay inay heshay ku dhawaad 75,000 codsi shan boqol oo shaqooyin xafiiska canshuuraha. In kabadan laba kun oo qof ee dadka shaqada codsaday ayaa haystay shahaadada degree-ga darajada ugu saraysa. Nigeria ayaa la tacaalaysa hoos u dhac dhaqaale oo ay sababtay sicirka shidaalka ee hoos u dhacay.Read More
Kenya oo ciidamadeeda kala bexeyso Suudaanta Koofureed
November 3, 2016 at 6:27 am	0 comments
Dowladda Kenya ayaa sheegeysa inay ciidamadeeda kala soo bexeyso dalka Suudaanta Koofureed. Arrintani waxay daba socotaa, taliyaha Ciidamada nabad ilaalinta oo Kenya u dhashay ayaa shaqada laga ceyriyay. War qoraal ah oo kasoo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee Kenya ayaa lagu sheegay in shaqa ka fariisinta Janaraal Johnson Mogoa KimaniRead More
Hogaamiyaha daacish Al-Baqdaadi oo fariin cod ah soo diray
November 3, 2016 at 6:24 am	0 comments
Ururka la baxay Khilaafada Islaamka ayaa soo saaray cod ay ku sheegeen inuu yahay midka hogaamiyahooda Abu Bakar Al-Baqdadi. Wuxuu codkaasi ku baaqayaa in shacabka ay difaacaan magaalada Moosil. Wuxuu intaasi ku daray inaysan ka bixi doonin magaalada, uuna ku kalsoon yahay inay guul gaarayaan. Waa farriintii ugu horeysay ooRead More
Trump iyo Obama oo olole iska soo horjeeda ka wada Florida
November 3, 2016 at 6:23 am	0 comments
Xisbiyada Jamhuuriga iyo Dimuquraadiga ayaa markale foodda isku daray gobolka Florida oo ay u arkaan inay muhiim u tahay doorashada isbuuca soo socda. Qarashka guud ee xayeysiinta iyo ololaha uga baxay labada xisbi ayaa sare u sii kacay. Waxaa lagu qiyaasayaa in boqol milyan oo dollar uu musharax kastaa kuRead More